ပညာရေးနဲ့ ကျောင်းနဲ့ ဘာကွာသလဲ? - Sharemal
ပညာရေးနဲ့ ကျောင်းနဲ့ ဘာကွာသလဲ?
လူတိုင်းထင်တာက ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ တယ်။ ပညာသင်ပေးတယ်၊ ဘွဲ့ ရတယ်။ ပညာတတ်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့အတွေးတွေက မှန်လား၊ မှားလား ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ လူတိုင်းကျောင်းသွားခဲ့ရတာ မှန်ပေမယ့် ကျောင်းမှာ သင်ရတာက သီအိုရီပဲရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ် အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ဖြစ် သင်ကြားစရာက သီအိရီတွေပဲရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ ဘ၀ အတွေ့ အကြုံကို ကျောင်းပီးမှ သင်ကြားခွင့်ရကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က များသောအားဖြင့် ကျောင်းကို အသက်၂၃ နှစ်ထိတတ်ကြပြီး အလုပ်ခွင်ကိုအသက် ၂၀ကျော်မှ ၀င်ကြပါတယ်။ ဒါတွေက သာမန်ဖြစ်စဉ် တွေပါ။ သူများနဲ့ မတူပဲ ကွဲထက်အောင်မြင်တဲ့ လူတွေအကြောင်း နည်းနည်းလေး ကြည့်ရအောင်
ဆိုပါစို့ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson သူတို့ တွေရဲ့ ကျောင်းတတ်ခဲ့တဲ့ အခန်းဂဏ္ဏကို ပြောကြည့်ရအောင်။ ဒီနေရာမှာ လူတွေ ထင်တာက သူတို့ ရဲ့ ပညာရေးက ဆုံးခန်းမတိုင်ဘူး ထင်ကြတယ်။ မှားပါတယ်။ သူတို့ မပီးပြတ်တာက ကျောင်းကိုဆုံးအောင်မတတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သီအိုရီတွေထိုင်ပီး နားထောင်၊ အဲ့ဒါတွေကို စာရွက်မှာ ပြန်ရေးပြီး စာမေးပွဲကြီးကိုဖြေရတာ သူတို့ လို လူမျိုးတွေအတွက် ရင်ခုန်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ဒီလိုတွေပြောနေလို့ ကျောင်းဆိုတာကြီးကို မကောင်းဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေသိထားတဲ့ ပညာဆိုတာဘာပါလဲ။ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကိုပြောတာပါ။ ကျောင်းသင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေလောက်ကိုပဲ ပညာလို့ ထင်ထားရင် သင်မှားနေပီဆိုတာ ပြောပါရစေ။ အထက်က ဖော်ပြတဲ့လူတွေက ဘာလို့ ထူးချွန်ကြတယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ။ သူတို့ က သူများနဲ့ မတူတဲ့ အတွေးအခေါ် အသစ်တွေကို ပိုတွေးနိင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ သမားရိုးကျ ဖြစ်စဉ်ထက် ပိုဆန်းသစ်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးကို လူတိုင်းမတွေးနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူနည်းစုသာ ထူးချွန်မှူကို ပိုင်ဆိုင်ကြတာပါ။ တော်တဲ့လူတွေကလည်း သူတို့ ထက်တော်တဲ့ လူတွေနဲ့ သာ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ကြပါတယ်။
ပညာရပ်ဆိုတာ သေတဲ့အထိလေ့လာလို့ မကုန်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ပညာရပ်ဆိုတာ လေ့လာရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ လေ့လာသမျှ အသုံးချဖို့ လည်း လိုပါတယ်။ မှားတာရှိရင် ပြန်ပြင်မယ်၊ မှန်သွားရင် ပိုကောင်းအောင် ဆက်လုပ်မယ်။ ဒီလို နည်းနဲ့ လေ့လာမှ ပညာရပ်ကို ကောင်းစွာလေ့လာနိင်တဲ့ နည်းမှန်မှာပါ။
အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ခေတ်မှာ လူအများစုက ကျောင်းကရတဲ့ ဘွဲ့ လက်မှတ်ကို ဘ၀ထင်ပြီး မာန်တက်နေကြပါတယ်။ လွဲမှားတဲ့ အယူအဆကြီးကို လက်မခံစေချင်ပါဘူး။ တစ်ကယ့် ပညာတွေဆိုတာ ကျောင်းရဲ့ ပြင်ပမှာ သင်ကြားရတာပါ။ ဘွဲ့ လက်မှတ်ဆိုတာ ပညာသင်ဖို့ လမ်းစ တစ်ခုအဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ ကျောင်းမှာ သင်ကြားခဲ့တဲ့ အရာတွေသာမက လက်တွေ့ မှာ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်က ပညာတွေပါလေ့လာဖို့ အကြံပြုရင်း နဂုံးချုပ်ပါရစေ။